Grouper को लागि फिशिंग को अनिवार्य
कूलरमा उत्कृष्ट टेबल भाडा राख्नु सजिलो हुन सक्छ यदि तपाइँ यी सुझावहरू पालना गर्नुहुन्छ
प्रायजसो एङ्गलरहरूको लागि सबैभन्दा क्लासिक तल माछा झोक्रो हो। बिरोधमा रातो, ग्याङ्ग, कालोफिन, वा वारसा, बर्फको छातीमा राम्रो गम्भीर असर पर्दछ यदि धेरै मानिसहरूका लागि एक सफल दिन हो।
न्यू इंग्ल्यान्डबाट ब्राजेर र दक्षिणी ब्राजेर र टेक्सासका केही प्रजातिहरू। तिनीहरू प्रायः कुनैपनि प्रकारको तल्लो संरचनाको नजिक छन्। दक्षिणी फ्लोरिडामा, तिनीहरू सबै उष्णकटिबंधीय कोरल चट्टानहरू बस्छन्।
फ्लोरिडाको उत्तर, तिनीहरू तल र ढोकाहरू, प्रत्यक्ष तल, र कृत्रिम चट्टानहरू र मलबे भेट्टाउन सकिन्छ। तिनीहरू आश्रित खोज्न र लुकाउन सक्षम हुन्छन्, र यद्यपि तिनीहरूको नामले उनीहरूलाई एक साथ बस्छन्, तिनीहरू पनि धेरै नैतिक माछा पनि हुन सक्छन्। ठूला ठूला भए।
तिनीहरूले कसरी खान पाउँछन्?
Grouper कहिले काँही एक चारा पीछा गर्नेछ, तर टाढाबाट उनीहरूले आफ्नो शिकारलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहन्छन्। तिनीहरूको रंग र तिनीहरूको परिवेशको पहिचान गर्न कोष र छाडहरू परिवर्तन गर्ने क्षमताले उनीहरूको क्षमताको क्षमता दिन्छ। यो यो अस्पष्ट क्षमता हो जसले तिनीहरूलाई अपेक्षाकृत सजिलो बनाउँछ, तर भूमिलाई गाह्रो बनाउँछ। एन्जिल्सले पत्ता लगाएअनुसार मध्यम भारी तल माछा माछाको टेलले गोकरमा पुग्ने उत्तम तरिका हो। तेस्रो पचास-पौंड वर्गमा परम्परागत रीलहरू मध्यम घाँटीको डुङ्गाको छेउमा चाल हुनेछ। Grouper अन्य साना माछा माछा, कुकुर या क्र्राफिश जस्तै क्रस्टेशियन्स, र स्क्विड। तिनीहरू आफ्नो ढोकामा भर्खरै एक छेउमा बस्न रुचाउँछन् वा चट्टानमा एक छेदमा समर्थन गर्छन्।
जब एक सजिलो अवसर स्विम किन्नु उनीहरूले भाग्न थाले, उनीहरूको शिकारलाई हान्छन्, र तुरुन्तै आफ्नो मासुमा फर्किन्छन्।
त्यहाँ मूलतया तीनवटा राउन्डहरू प्रयोग गर्दछन् जब कुखुराको लागि माछा पकड्ने - सिधा तल माछा मार्ने, नि: शुल्क अस्तरले चोकमा बाँच्न सक्छ, र ट्रेलिंग ढिलो गर्दछ। मेक्सिको खाडीमा एङ्गलरहरू गल्तीको लागि एकदम सफल ट्रेलिङ छन्।
पहिला तल माछा मार्ने विधिको बारेमा कुरा गरौं। एक राम्रो छडी र रील , पचास-पाउण्ड परीक्षण मोनोफिलेम्यान लाइनको साथ, तपाईले सामना गर्न सक्नुहुने सबै गल्ती गर्न सक्दछ। रेखा भन्दा धेरै ठूलो छ कि ओभरकिङ्ग छ कि जटिल छ, र, केहि विश्वास गर्छ, माछाको लागि दृश्य।
टर्मिनल टकलले सिंकर, नेता, र हुकमा दुईवटा तरिकाहरू व्यवस्थित गर्दछ। पहिलो तरिकालाई माछा खोजकर्ता रिग भनिन्छ प्रायः एङ्गलरहरू। यो नेताको धेरै अन्तमा एक पिरामिड वा बैंक सिंकरसँग बाँधिएको छ। सिंकबाट लगभग 18 इन्च माथि नेता मा बाँधिएको पाश हो। पाश लगभग बाह्र इन्च लामो छ र यो हुक बाँधिएको यो पाश हो। यस रिगको एक भिन्नतामा दुई छोरो र हुकहरूसँग एक लामो नेता छ।
माछा खोजकर्ता रग लगभग सबै तल्लो माछा पकडने चार्टर नौकाहरु को पसंदीदा तल रिग हो। यो डुङ्गाको तल सीधा तल माछा माछाको लागि उत्कृष्ट छ। रिग सही तल तल्लो ढाँचामा खसेको छ जब पनि, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ, केहि कप्तानलाई प्रेम गर्दछ।
माछा पत्ता लगाउने मा प्रयोग गरिने सामान्य चारा चारा काटिएको छ, या त स्क्विड वा सानो माछा, र कहिलेकाहीं एक सानो लाइभ ब्याट। यो रिग गोकर सहित विभिन्न प्रकारका प्रजातिहरू समात्नेछन्।
अधिक गम्भीर ग्रिपर एङ्गलरले लाइभ ब्याट रिग भनिन्छ, दोस्रो दृष्टिकोणको विकल्प लिनेछ। यो एक नेता भन्दा माथि रेखामा अण्डा सिंकर थियो। नेता लामो छ, कहिलेकाहीँ पाँच वा छौँ फुट लामो। यस रिगमा छनौटको हुक एक सर्कल हुक हो, सामान्यतया 8/0 वा 9/0 आकारमा (8/0 सर्कल हुक एक 5/0 नियमित हुक को रूपमा एक नै आकारको बारेमा हो)।
यी तलका रगहरू मोनोफिलिमम नेताहरूको प्रयोग गर्छन्। अधिकांश एङ्गलरहरूको लागि नेता सामग्रीको छनौट फ्लोरोकोर्बन हो। माछाको रूपमा लगभग अदृश्य रूपमा विज्ञापित, यसले नियमित monofilament भन्दा बढी स्ट्राइकहरू आकर्षित गर्न लाग्दछ।
लामो नेताले छोटो नेता भन्दा बढी स्वतन्त्र र स्वाभाविक रूपले तैरने को लागि एक जीवित चारा अनुमति दिन्छ। स्लाइडिङ अन्डा सिंकरले माछालाई छाती लिन र सिंकरको वजन बिना नबनाउन अनुमति दिन्छ।
अहिले सम्म सबै तयारी लगभग कुनै पनि तलल्लो माछाको लागि सुन्दर मानक भाडा हो। फर्क र गुप्तचर माछाको गुप्तमा गोप्य कुराले तपाइँ कसरी हड्ताललाई सम्हाल्छ।
Grouper चलाउछ, चारा चोरी गर्नुहोस्, र आवरणको लागि फर्काउनुहोस्। यो आदतले धेरै हराएको माछा र लटका रेखाहरू ल्याउनेछ। गम्भीर ग्ल्यापर एङ्गलरले आफ्नो रिेलमा क्यान्सर तल झिकेर कडा मेहनत गर्नेछन्, प्रायः एक जोडा टाँसेर प्रयोग गरी यसलाई लक गर्न। विचार लाइन लिने र घरको संरचनामा फर्काउन गोकर रोक्न हो।
जब एक गल्ती स्ट्राइक हुन्छ, एङ्गलरले आफ्नो रोटी रेलमा राख्नेछ र कडा कडा कताकता घुमाउन सक्छ। सर्कल हुकले हङ्किङलाई ह्यान्डिङ गर्ने हो। अहिले एङ्गलर र माछा बीचको शक्तिशाली शक्ति हो। प्रायः माछाहरू जित्न सकेन!
जब एक मुसीबतले यसलाई चट्टान वा चट्टानमा बनाउँदछ, धेरैजना एङ्गलरले लाइनलाई तोडेर फेरि प्रयास गर्नेछ। प्रेमी एङ्गलरले माछा माछाको ढोकामा लामो समयसम्म 30 मिनेटसम्म माछा दिइनेछ ताकि माछालाई आराम गर्न र सम्भवतः ढाँचा भित्रबाट बाहिर निस्कन अनुमति दिन्छ। यसले प्रायः धेरै एङ्गलरहरूको लागि एक भन्दा बढी अवसरमा काम गरेको छ।
ग्राउचर माछा पकडने को लागि तेस्रो तरिका trolling शामिल छ, र उपयोग गर्न को लागि trolling को दुई भिन्नताहरु छन्। मेक्सिकोको खाडीमा ग्ल्यापर एङ्गलरले म्याग्ने डाइविंग प्लग प्रयोग गर्दछ जुन गहिरो तीस वा बढीभन्दा बढी हुन्छ। खाडी तल्लोका धेरै क्षेत्रहरू लिजहरू र चट्टानमा छन्। कुनै पनि राम्रो चार्टमा कृत्रिम चट्टानहरू पचास माइल वा धेरै भन्दा बढी मिल्दो जस्तो भेट्टाउन सकिन्छ। Anglers ले यो संरचना को माथि र यस ठूलो वरिपरि यी ठूला कृत्रिम स्वरहरू टाल्यो।
मेक्सिकोको खाडीमा पानीको तुलनात्मक उर्जा हो, र यो विधि त्यहाँ राम्रो काम गर्दछ।
दोस्रो भिन्नता एक ट्रेलिंग वजन र ट्रेलिंग पंखको प्रयोग गरेर मोनल तार लाइनको साथ ट्रलमा छ। पट्टी बाटा काटिएका हुन्छन् र एक डबल हुक्के ट्रलिंग फिटरमा संलग्न हुन्छन्। एक छ-पैदल नेता एक पाउन्ड ट्रोल वजनको साथ बाँधिएको छ र त्यो वजन तार रेखासँग बाँधिएको छ।
धेरै भारी टेलले, तार लाइन सहित माछा मार्ने बेलामा कडा कडा गरिएको रोलर गाइड र रोलर टिप आवश्यक छ। यसले मत्स्य पालन संगठन भारी र निस्क्रिय राम्रो बनाउँछ।
तार लाइन विधि सर्दियामा दक्षिण फ्लोरिडाको आसपास लोकप्रिय छ जब ठूलो कालो झन्डाले क्यान्सर चट्टानमा जान्छ। प्याच रित्तो पानीको बीस फिटमा तल निस्क्यो सतह तल तल तीन फिट माथि। कहिलेकाहीँ व्यासमा तल्लो गहिरो, तिनीहरू कालो गुच्छाको लागि एक आदर्श आवास हो। एन्जिल्सले यी चट्टानहरूको किनारमा ट्राफिकको रूपमा पर्खिरहेका थिए। जब एक हुन्छ, डुङ्गा माछा आफ्नो प्वालबाट टाढा तानेर घुमाउरो टाढाबाट टाढा जान्छ। तार को रेखा को पहिलो केहि गज अक्सर रड धारक मा अझै पनि रोड संग रील गरिएको छ। यो साँच्चिकै मासु माछा मासु हो, वास्तविक माछाको लडाकुको लागि सानो मौका छ; तर, यो फरक छ, र यो माछा माछा राख्छ!
एक सहकारी फिश
Grouper सामान्यतया धेरै सहकारी छन्। यदि तिनीहरू माछा मार्ने बेला तिनीहरू भट्टेमा छन् भने तिनीहरू प्राय: चाँडै काट्न सक्नेछन्। यदि तपाईं 30 मिनेट वा बढी को लागी माछा माछा माछा माछा मार्न सक्नु हुन्न भने, तपाईं शायद एक विनाश जनसंख्या को बिना एक मलबे माछा माछा माछा गर्दै हुनुहुन्छ। यसको समय सारियो!
सबैले आफ्नै आफ्नै माछाको लागि माछा माछाको लागि सुसज्जित छैन। यी घटनाहरूमा, एक स्थानीय पार्टी डुङ्गा वा टाउको डुङ्गा जसले चरा र टेकले खानेकुरा लिन केहि घर ल्याउन एक आदर्श तरिका हो। धेरै माछाहरू झन्झटझैं कुच्याउने वा कुकिलो वा खाना खानेकुरा राम्रो हुँदैन!
कसरी ब्लिलीहू बाट माछा को तुरुन्तै रिग गर्नुहोस्
फ्लाइंग फिश: बिग गेम पालेक्सीहरूको लागि एक शीर्ष बाई
एम्बरजैक - चार्टर कप्तानको मित्र
सिचिंग स्कूपिन: क्यालिफोर्नियाको वृश्चिकफिश
Saltwater मा ड्रट शॉट मत्स्य पालन
सर्वश्रेष्ठ रेखा क्रिमिंग प्रविधिहरू
प्यासिफिक बोनिटो: सबैभन्दा सानो टुना
मेरो बारेमा उद्धरण
रोमनको तालिका ग्रीक देवताहरूको समकक्ष
Coelacanths, विश्वको मात्र लिङ्ग "विलुप्त" माछा
केवल 10 चलचित्रहरूमा आतंकमा युद्ध
Macroeconomics विद्यार्थी संसाधन केन्द्र
मूल 54 बिटर
Exosphere परिभाषा र तथ्याङ्क
विनील एस्टर बनाम पलिएस्टर रेजिन
ले कोर्बोसियरको जीवनी, अन्तर्राष्ट्रिय शैलीको नेता
जाँदै र चाहेको
क्यालिफोर्नियाका बोसो कम्पनीहरु को को हो
ठुलो बिन्दु डिप्रेशन उदाहरण समस्या
Girolamo Savonarola को जीवनी
स्व-रोजगारी कला र शिल्प विक्रेताओंका लागि कर विचारहरू
12 भन्दा धेरै ट्रान्सपोर्टर "स्टार ट्रक" मा दुर्घटना
राष्ट्रपति डेबेट चुटकुले
जापानी बेबी नामहरूमा प्रचलनहरू
मिति र समय मा जर्मन
महजँग प्ले गर्न शुरुवातको गाइड